Daryeelka Caafimaadka ee Aan Xuduudda Lahayn iyo Kuugga Bobby Chinn ayaa Soo Saaray Daruuro Cusub oo Caafimaad leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Daryeelka Caafimaadka ee Aan Xuduudda Lahayn iyo Kuugga Bobby Chinn ayaa Soo Saaray Daruuro Cusub oo Caafimaad leh
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Wararka Mareykanka
Kooxda Daryeelka Caafimaadka ee Aan Xuduudda Lahayn, oo ah hormuudka caalamiga ah ee teknolojiyadda daryeelka caafimaadka, warbaahinta, isgaarsiinta, nuxurka, iyo adeegyada, ayaa soo saaray Delicious.Health, oo ah daruurkii ugu horreeyey ee is -dhexgal caafimaad leh ee adduunka. Iyada oo ay weheliso, kuugga caanka ah ee caanka ah Bobby Chinn, adeegga cusub wuxuu soo rogi doonaa madal istuudiyaha TV-ga daruur-ku-saleysan oo loogu talagalay cunto-kariyeyaasha meel kasta oo adduunka ah si loo abuuro barnaamijyadooda karinta.
Qaabkan cusub ee wax-wada-karinta ayaa la filayaa inuu dhaafo qaabka toosan ee hadda jira ee fasallada karinta ee internetka.
Macaamiisha ayaa hadda aad u xiiseynaya inay bartaan sida loo kariyo cunto macaan oo weliba caafimaad leh.
Iskudarka sii kordhaya ee cuntada, fayoobaanta iyo tiknoolajiyadda oo soo bandhigaya fursad aad u weyn oo aan dhab ahayn oo loogu talagalay warshadaha soo -dhoweynta.
"U oggolaanshaha cunto -kariyeyaasha inay u sheegaan cuntooyinkooda caafimaad leh xirfadleyda fayoobaanta iyo malaayiin guri -sameeyeyaal ah waa horumar, labadaba xagga aqoonta iyo sidoo kale qaabka soo -bandhigidda," ayuu sharraxayaa Dr Wei Siang Yu, guddoomiyaha iyo aasaasaha Kooxda Daryeelka Caafimaadka ee Xuduudda. “Qaabkan cusub ee wax-wada-karinta ayaa la filayaa inuu dhaafo qaabka toosan ee hadda jira ee fasallada karinta internetka. Waxaan ku kalsoonahay in macaamiisha hadda ay aad u xiiseynayaan inay bartaan sida loo kariyo cunto macaan oo sidoo kale caafimaad leh. ”
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo Delicious
Sida laga soo xigtay cilmibaarista suuqa, suuqa cuntada caafimaadka iyo fayoobaanta ee adduunka oo ay weheliso jikada daruuriga ah iyo suuqa gaarsiinta cuntada ee onlaynka ah ayaa la filayaa inay gaaraan qiime lagu qiyaasay US $ 394.75 bilyan marka la gaaro 2028. Iyadoo macaamiishu ay u jihaysanayaan ikhtiyaarrada caafimaadka leh iyo karinta guriga, Kooxda Daryeelka Caafimaadka ee Xuduudda ahi waxay aqoonsan tahay isku soo dhawaanshaha sii kordhaya ee cuntada, fayoobaanta iyo tiknolojiyadda oo soo bandhigaya fursad aad u weyn oo aan dhab ahayn oo loogu talagalay warshadaha soo -dhoweynta.
Delicious.Health wuxuu u oggol yahay hiliblayaasha iyo meheradaha adeegga cuntada inay ku xirmaan oo ay la kaashadaan khabiirada caafimaadka, fayoobaanta iyo sayniska cuntada oo leh kaalmo cunto oo luqado badan leh si loo abuuro cuntooyin sax ah oo loogu talagalay macaamiisha miyirka u leh caafimaadka. Madalku wuxuu bixiyaa xalal isku-dhafan oo e-commerce ah oo loogu talagalay magacyada cuntada si ay ula shuraakoobaan hilibleyda iyo in la abuuro waaya-aragnimo cunto-karsan oo macmiilku ka iibsan karo badeecadaha ka muuqda Delicious.Health. Waxaa sidoo kale loogu talagalay inay u oggolaato macaamiisha inay si wadajir ah wax ula karsadaan kuugga caanka ah iyo inay taageeraan noocyada cuntada caafimaadka leh si ay uga faa'iidaystaan ​​suuqgeynta omnichannel ee xoogga leh. Delicious.Health wuxuu ujeedkiisu yahay inuu isku xiro waxyaabaha ku jira, adeegyada, badeecadaha, sirdoonka macmalka ah iyo Internetka Waxyaabaha (IoT) hal daruur oo ay kariyeyaashu si toos ah ugu xiriiri karaan macaamiishooda.
Saddexda bilood ee soo socota, Delicious.Health wuxuu u bilaabi doonaa adeeg cunto -kariyeyaasha si ay ugu noolaadaan saxeexooda cuntada cuntada leh ee caafimaadka leh. Cunto-kariyeyaasha ka-qaybgalayaashu waxay geyn doonaan baloog cusub iyo tiknolojiyad ciyaar si ay u sameeyaan bandhigyadooda karinta ama dhacdooyinka tooska ah ee tooska ah. Macaamiishu waxay iska qori karaan Delicious.Health si ay ugu biiraan dhacdooyinka kala duwan ee internetka. Daahfurka Delicious.Health waa tallaabada ugu horreysa ee sida daruurtaan cusub ay u taageeri karto rabitaanka cunto kariyeyaasha si ay u noqoto dhagaxa cuntada ee omnichannel.
Delicious.Health wuxuu ka doodi doonaa bandhigyo si wada jir ah wax loo karsado oo ay ku jiraan hilib-yaqaanno caan ah oo la soo xulay oo ay ku jiraan taxane la leh kuugga caanka ah Bobby Chinn si looga caawiyo dadka cusub inay bilaabaan duuliyeyaasha TV-ga iyaga u gaar ah. Bobby Chinn wuxuu isu taagay inuu yahay dhagaxa dhagaxa ah ee Aasiya iyo Bariga Dhexe oo dhan, laga soo bilaabo martigelinta taxanaha TV-ga ee "World Café Asia" ee Discovery TLC iyo noqoshada kulan joogto ah MBC's "Top Chef Middle East", mid ka mid ah kuwa ugu badan bandhigyada cunnada ee caanka ah Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinka wada-karinta tooska ah ee macaamiisha ayaa laga heli doonaa macaan.caafimaad.
Ku saabsan Kooxda Daryeelka Caafimaadka ee Aan Xuduudda Lahayn
Waxaa la aasaasay 2008, Kooxda Daryeelka Caafimaadka ee Xudduudda (BHG) waa hormuudka caalamiga ah ee dhaqaalaha daryeelka caafimaadka ee macaamiisha halka tikniyoolajiyadda, adeegga, nuxurka, warbaahinta, waxsoosaarka iyo sayniska xogta laga dhigo kuwo ka dhex shaqeeya nidaamka deegaanka ee caalamiga ah ee kooxaha ganacsiga ee ka soo jeeda daryeelka caafimaadka, da 'la'aanta , fayoobaanta, nafaqada saxda ah, teknolojiyadda, warbaahinta, bio-bangiga, adeegyada daruuraha, sirdoonka macmalka ah, soo dhaweynta iyo maalgashiga. Inta badan dadaallada BHG waa kuwa ugu horreeya adduunka qaar badanna waxaa loogu talagalay inay carqaladeeyaan ama beddelaan qaybinta iyo silsiladda daryeelka caafimaad ee hadda jirta. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo halkan.
Ku saabsan Chef Bobby Chinn
Bobby Chinn isla markiiba waa la garan karaa inuu yahay shaqsiyad warbaahineed, kuugga caanka ah iyo marti -geliyaha caanka ah “World Café”. Hadda wuxuu si joogto ah ugu taagan yahay “Top Chef Middle East” wuxuuna martigaliyaa “Keep It Simple” oo la bilaabay 2020. Safarkii uu ku marayay kuugga caalamiga ah ee la mahadiyey, qoraa iyo dib-u-hayaha, Bobby wuxuu isu taagay inuu yahay udub-dhexaadka kanaalka caalamiga ah ee cuntada shabakadaha waxaana loo aqoonsaday inuu yahay khabiir ku xeel dheer cuntooyinka Aasiya iyo Bariga Dhexe. Bobby waa u doodaha waarta, cuntooyinka dhirta ku salaysan waxayna ku raaxaystaan ​​daawaynta suxuunta cusub si ay u muujiyaan xamaasadan. Wuxuu si joogto ah ugu muujiyaa sida Martida Cuntada ee bandhigyada karinta ee ugu jecel adduunka wuxuuna la kaashaday shaqsiyaadka sida Keith Floyd, Martha Stewart, Anthony Bourdain, Antony Worrall Thompson iyo Andrew Zimmern. Bobby wuxuu kaloo ahaa safiirkii hore ee dalxiiska ee Fiyetnaam ee Midowga Yurub. Wax badan oo ku saabsan Bobby Chinn.